शहरः फष्टाउँदो फिटनेस कल्चर, रोजाई जुम्बा डान्स:: Artha Dabali
शहरः फष्टाउँदो फिटनेस कल्चर, रोजाई जुम्बा डान्स
काठमाडौं / शहरी कल्चर पछिल्लो समय बदलिदो छ ।
आधुनिक जीवनशैली बदलिदो परिस्थितिले मानिसको दैनिकीलाई नै फेरबदल गरेको छ । शहरमा मानिसहरुको हिड्डुल निकै कम हुन्छ । आफ्नो घर कार्यलय तथा बजार आउजाउको धपेडीमा हुनेले निजी सवारी प्रयोग गर्दछन् नै बाँकीले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दछन् ।
निकै कम मात्र मानिसहरुको शारिरिक परिश्रम र दौड धुप हुन्छ । प्रविधि र आधुनिकताले हाते कामहरु बसीबसी किवोर्ड थिचेको भरमा सम्पन्न हुन्छन् । स्वभावैले मानिसहरु आरमदायी पेशा र सुख खोज्दै जाँदा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति भने वेखवर हुने गरेको पाइन्छ ।
यसैले पनि होला राजधानीका चोक–चोकमा फिटनेस सेन्टर र जुम्बा डान्सका बोर्डहरु बाक्लिन थालेका छन् । कस्तो मज्जा एकै ठाउँ एकै स्थानमा सुरक्षितसाथ फिटनेसका विभिन्न उपकरण उपलब्ध भएपछि । यो बाक्लो बस्तीका धमिलो साँघुरा सडकमा किन दौडिरहने ?
आजको आधुनिक दुनियाँमा हुर्किएका तन्देरी होस् वा पाको उमेरा मानिस । बलियो खाइलाग्दो आकर्षण शारीरिक सुगठन मानिसहरुको पर्सनालिटी नै हुन् ।
अझैँ युवायुवती र तन्देरीमा बडी स्लिम र सिक्सप्याक फेसनको रुपमै मौलाएको छ । अरुभन्दा फरक देखिन होस् वा अरुजस्तो देखिन मानिसहरु आफ्नो शारिरीक बनावट आकर्षक बनाउन मात्र होईन आफ्नो शरिरलाई स्वस्थ चुस्त बनाउन पनि यस्ता फिटनेस सेन्टरमा धाउनेहरु बाक्लिदै गएको छ ।
परापूर्व कालदेखि नै नियमित व्यायाम योगाले मानिसको स्वास्थ्य राम्रो हुने कुरा सिद्ध छ । दैनिक खानपानमा ध्यान दिँदा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा पनि स्वास्थ हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । यसर्थ नियमित व्यायाम गर्नु स्वस्थ हुनका साथै आफ्नो आयू बढाउनु हो भन्ने बुझाई पनि छ । पछिल्लो समय मानिसहरुको शारीरिक श्रम कम गर्ने मानिसहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसले गर्दा पसिनाबाट वाहिर निस्कने शरिरका विकारहरुले समस्या निम्त्याउँने सम्भावना बढी हुन्छ । शरिरबाट पसिना निस्कने गरी व्यायाम गर्नुपर्छ भनिन्छ । स्वस्थ रहन होस् वा आकर्षण रहन सेलिब्रेटी होस् वा व्यवसायी वा साधारण मान्छे सबैको रोजाइमा फिटनेस सेन्टरहरु पर्ने गरेका छन् ।
काठमाडौँको प्रदुषित वातावरण, अव्यवस्थित बस्ती/जीवनशैली तथा खानपानले उपत्यकाबासी बढी आफैं पीडित छन् । गायक रामकृष्ण काफ्ले भन्छन् ‘गायकको लागि त फिटनेस झनै अनिवार्य रैछ, नभए गीतचाहिँ मीठो गाउँने तर मान्छेचाहिँ भुँडे, अनि भुँडि घटाउनै भए पनि फिटनेस धाउने बढेका छन्’ ठट्यौली शैलीमा उनले भने ।
अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान र भोग विलासमा मानिसहरु रमाइरहेका छन् । भेट्दा पेटभरी खाने र नभेट्दा दिनभर भोकै बस्ने नेपालीको बानीले पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्याइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसैले पनि खानपानमा हामीले ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । घरमा खाना बनाउन अल्छि गर्ने नभ्याउनेहरुलाई जंक फुड खानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्को स्वादका लागि जंक फुड रुचाउँनेहरुको जमात बढिरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सकेसम्म यस्ता फुडहरु बढि विकाउन दौडधुप छ । यसैले पनि शरिरलाई फिट राख्नु जोखिमको विषय बनेको छ राजधानीबासीलाई ।
शहरी जीवन गाउँको विल्कुल बेग्लै हुन्छ । उकालो ओरालो, कुटो÷कोदालो पक्कै हुँदैन । यसैले पनि फिटनेस सेन्टर मानिसलाई आवश्यक भइसक्यो । करिब २५ बर्षदेखि फिटनेस व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका अक्सफोर्ड फिटनेस सेन्टरका प्रोपाइटर उदय श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी अरुको शरिर हेर्छौ र आफुलाई पनि त्यहि अनुरुप स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त बनाउने इच्छा गर्छौ ।’ फिटनेस रहन इच्छाशक्तिसँगै नियमित अभ्यास पनि चाहिने उनको अनुभव छ । त्यस्तै इन्द्रेणी फिटनेस सेन्टरका प्रोपाइटर दिपक श्रेष्ठ भन्छन् ‘जिम गर्नु फेसन जस्तै पनि भएको छ तर यसकाबारेमा बुझेर मात्रै जिम गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त रहनका लागि जिम तथा व्यायाम असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।’
‘कतिपय मानिसहरु आफ्नै स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्छन् । एक÷दुई दिन फोटो खिच्नैको लागि पनि फिटनेस सेन्टर आउने तर निरन्तरता नदिनेहरु पनि छ ।’ व्यवसायी श्रेष्ठले आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । यदी आफ्नो इच्छा चाहाना अनुसार शरिर बनाउने हो भने फिटनेस सेन्टरको नियमको पालना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै फ्रिडम फिटनेस सेन्टका प्रोपाइटर तथा प्रशिक्षक मिलन सिजापति शरिरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्ने हो भने खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘हामीलाई स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त राख्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा खानपान हो । बजारका मिसावटयुक्त खाना र अत्याधिक चिल्लो, पिरो, माछा, मासु, पेयपदार्थ आदिले दिन प्रतिदिन हाम्रो शरिरलाई असर गरेको हुन्छ ।’ यसबाट उत्पन्न समस्या न्युनिकरणको लागि पनि एक्सरसाइज आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । ओर्चिड फिटनेस सेन्टरका सञ्चालक तथा अध्यक्ष गणेश अधिकारीको विचारमा मानिसका लागि योगा र जिम दुवै आवश्यक छ । स्वास्थ्यका हिसाबले जुन फाइदाजनक छ सोहि गर्नु पर्दछ ।
महिलाहरुको हकमा भने जुम्बा सबैभन्दा राम्रो एक्करसाइज भएको प्रशिक्षकहरु बताउँछन् । थकान तथा अल्छि लागेको बेला जुम्बाले फूर्तिलो बनाउने काम गर्छ । लामो समय जुम्बाको प्रशिक्षण दिएकी प्रशिक्षक प्रतिमा श्रेष्ठ भन्छिन् ‘जुम्बाले मान्छेको शारिरका मानिसक सन्तुलनलाई बलियो फूर्तिलो बनाउने काम गर्छ ।’ मानसिक तनाव खेपिरहेका महिलाहरु रुन्चे मुख लगाएर आउने र जादाँ असाध्यै खुशी भएर जाने गरेको प्रशिक्षक प्रतिमाको अनुभव छ । उनी भन्छिन् ‘गीतमा नाच्नुको मज्जा नै बेग्लै रहेको छ । गीतमा एक प्रकारको इनर्जी हुन्छ ।’ गीतले थकान र मोटोपना घटाउन जुम्बा डान्स प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मान्छेलाई शारिरक व्यायामले मात्र पनि पुग्दैन । धेरै एक्सरसाइज र खाना कम गर्दा फिट रहने मानसिकता गलत हो । यसका लागि एक्सरसाइज र खानोकुराको व्यालेन्स मिलाउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
शुक्रबारको राशीफल : राशीअनुसार तपाईको भाग्य कस्तो छ आज ? हेर्नुस् राशी
कुञ्जपार्क बन्दै आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण
वाणिज्य बैंकले विशेष साधारणसभा, यस्ता छन् महत्वपूर्ण निर्णय